အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Wonnral - ဝီကီပီးဒီးယား
၁ ဝီကီပီးဒီးယားမှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ် Wonnral !
၂ ကရင်ရှင်ဘုရင်များ အား မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် အဆိုပြုထားခြင်း
၃ File:တံခွန်တိုင်ရှိနေထွက်ပုံ.jpg ၏ ဖိုင်ရင်းမြစ်နှင့် မူပိုင်ခွင့် ပြဿနာ
၄ File:တံခွန်တိုင်ရှိနေထွက်ပုံ-၂.jpg ၏ ဖိုင်ရင်းမြစ်နှင့် မူပိုင်ခွင့် ပြဿနာ
၅ File:တံခွန်တိုင်ရှိနေထွက်ပုံ-၁.jpg ၏ ဖိုင်ရင်းမြစ်နှင့် မူပိုင်ခွင့် ပြဿနာ
ဝီကီပီးဒီးယားမှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ် Wonnral ![ပြင်ဆင်ရန်]
--Welcome-Bot (ဆွေးနွေး) ၁၆:၁၄၊ ၃၀ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၈ (UTC)
ကရင်ရှင်ဘုရင်များ အား မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် အဆိုပြုထားခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
ကရင်ရှင်ဘုရင်များ စာမျက်နှာအား ဝီကီပီးဒီးယားမှ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန်အတွက် အဆိုပြုထားပါသည်။ ဤသည်မှာ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ချက် အပိုင်း G12 အရ ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဆောင်းပါးသို့မဟုတ် ပုံသည် မူပိုင်ခွင့်ကို ထင်ရှားပြတ်သားစွာ ချိုးဖောက်ထားခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါး သို့မဟုတ် ပုံသည် http://waiyanthiri.blogspot.com/2016/04/blog-post_32.html မှ တိုက်ရိုက်ကူးယူထားခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပဒေရေးရာ အကြောင်းပြချက်များအရ အခြားဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ သို့မဟုတ် ပုံနှိပ်ပစ္စည်းများမှ ရယူထားသော မူပိုင်ခွင့်ရှိသော စာသားများနှင့် ပုံများအား ကျွန်ုပ်တို့ လက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အတွက် သင်၏ ထည့်သွင်းရေးသားထားမှုများသည်လည်း ဖျက်ပစ်ခြင်း ခံရနိုင်သည်။ ပြင်ပဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ သို့မဟုတ် အခြားသော ပုံနှိပ်မီဒီယာများမှ အချက်အလက်များအား ရင်းမြစ်အဖြစ် ရယူအသုံးပြုနိုင်ပြီး ဝါကျများ အား ရင်းမြစ်အဖြစ် အသုံးမပြုရပါ။ အရေးကြီးသည်မှာ သင့်ကိုယ်ပိုင် စကားလုံးများဖြင့် ပြောဆိုပါ။ ဝီကီပီးဒီးယားသည် မူပိုင်ခွင့် ချိုးဖောက်မှုများအား အထူးဂရုပြု ဆောင်ရွက်ပြီး မကြာခဏ ဖောက်ဖျက်သူများသည် တည်းဖြတ်ခြင်းမှ ပိတ်ပင်ခြင်း ခံရနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် ဤစာမျက်နှာသည် ဤအကြောင်းပြချက်ဖြင့် ဖျက်ရန် မသင့်ဟု ယူဆပါက၊ စာမျက်နှာသို့ သွားရောက်ကာ "ဤမဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ခြင်းကို ကန့်ကွက်ရန်"ကို နှိပ်ပြီး အဆိုပြုခြင်းကို ကန့်ကွက်နိုင်သည်။ ဤသို့ဖြင့် သင်သည် ရှင်းပြနိုင်မည့် အခွင့်အရေး ရရှိမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း စာမျက်နှာတစ်ခုသည် မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် သတ်မှတ်ခံရပြီးပါက စာမျက်နှာကို ချက်ခြင်း ဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ရန် သတိပေးချက်ကို သင်ကိုယ်တိုင် မဖယ်ရှားပါနှင့်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၃:၃၃၊ ၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈ (UTC)
File:တံခွန်တိုင်ရှိနေထွက်ပုံ.jpg ၏ ဖိုင်ရင်းမြစ်နှင့် မူပိုင်ခွင့် ပြဿနာ[ပြင်ဆင်ရန်]
File:တံခွန်တိုင်ရှိနေထွက်ပုံ.jpg ဖိုင်ကို upload တင်သည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သို့သော် ထိုဖိုင်တွင် မူပိုင်ခွင့် အခြေအနေနှင့် ရင်းမြစ်များ လိုအပ်နေပါသည်။ ဝီကီပီးဒီးယားသည် မူပိုင်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ အထူးဂရုပြု ဆောင်ရွက်ပါသည်။
သင် upload တင်ခဲ့သည့် အခြားဖိုင်များကိုလည်း မှန်ကန်စွာ tag လုပ်ထားခြင်း ရှိမရှိကိုလည်း ကျေးဇူးပြု၍ စစ်ဆေးပါ။ သင်၏ ဖိုင်တင်ထားခဲ့သည့် မှတ်တမ်းများကို ဤနေရာတွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၄:၀၅၊ ၂၅ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၉ (UTC)
File:တံခွန်တိုင်ရှိနေထွက်ပုံ-၂.jpg ၏ ဖိုင်ရင်းမြစ်နှင့် မူပိုင်ခွင့် ပြဿနာ[ပြင်ဆင်ရန်]
File:တံခွန်တိုင်ရှိနေထွက်ပုံ-၂.jpg ဖိုင်ကို upload တင်သည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သို့သော် ထိုဖိုင်တွင် မူပိုင်ခွင့် အခြေအနေနှင့် ရင်းမြစ်များ လိုအပ်နေပါသည်။ ဝီကီပီးဒီးယားသည် မူပိုင်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ အထူးဂရုပြု ဆောင်ရွက်ပါသည်။
File:တံခွန်တိုင်ရှိနေထွက်ပုံ-၁.jpg ၏ ဖိုင်ရင်းမြစ်နှင့် မူပိုင်ခွင့် ပြဿနာ[ပြင်ဆင်ရန်]
File:တံခွန်တိုင်ရှိနေထွက်ပုံ-၁.jpg ဖိုင်ကို upload တင်သည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သို့သော် ထိုဖိုင်တွင် မူပိုင်ခွင့် အခြေအနေနှင့် ရင်းမြစ်များ လိုအပ်နေပါသည်။ ဝီကီပီးဒီးယားသည် မူပိုင်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ အထူးဂရုပြု ဆောင်ရွက်ပါသည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသုံးပြုသူ_ဆွေးနွေးချက်:Wonnral&oldid=447394" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၉၊ ၁၄:၀၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။